Waxaa sii kordhaya khasaaraha ciidamada Nasaarada Mareykanka iyo kuwa Kenya kasoo gaartay weerar dhabba gal ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada hoose.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo fuliyay weerarka kamiinka ah ayaa Gantaalada garbaha laga rida la helay gaari Cabdi bile ah oo la rumeysanyahay iney la socdeen saraakiil caddaan ah.
Goobta kamiinka ka dhacay waxaa soo caga dhigtay diyaarado nooca Elecobtarka ah kuwaasi oo halkaasi qaaday saraakiil iyo askar caddaan iyo madow isugu jirta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkaasi dhabba galka ah.
Warar hoose oo laga helay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa xaqiijinaya in diyaaradahaasi garoonka ka dajiyeen meydad iyo dhaawacyo gaalo caddaan iyo madow ka kooban.
Dhowr jeer howlgalo isugu jira Kamiin iyo qarax oo ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo waxaa lagu dilay askar iyo saraakiil isugu jirta Americanâ€™Kenyaatiâ€™Itoobiyaan iyo kuwa maamulka gaala raaca Axmed Madoobe.
Previous: Ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo La Wareegay Degmo Muhiim Ah.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 27-05-1438 Hijri.